Suuqa Garoobyada Waxbaa Kasi Ah
Waxaan Ku Billaabanayaa Magaca Alle Ee Naxariista Badan Naxariista Khaaska ahna leh. Nabigeennii Muxammadna Naxariis Iyo Nabadgelyo Dushiisa Ha Ahaato.
Tan iyo markii aan billaabay qoritaanka kitaabka aan ku magacaabay:
Kadib markii aan ku baahiyay websidyada cutubka 1aad ee kitaabka oo aan ku magacaabay:
ILama Guursan Kartid Waa Gaalnimo
(( Halkan Waxaad ka akhrisan kartaa cutubka 1aad )).
Ayaa waxaa igu soo xoomma goob walbaa oo aan joogaba walaalo cabbursanaa oo mar uun doonayay in baabkan lafuro. Halka walaalo badanna ay igula soo xiriireen Email wallaw ay walaalaha Emailka igula soo xiriiray ay ku kala aragtiyo duwanaayeen. Waxayna isugu jireen qaar mu’ayidiin iyo mucaaradba leh waana sida caadada insaanka u badan.
Walaalaha igu soo xoomma kolkay I arkaanba waxay qoraalka ka fahmeen inaan hayo dumar badan oo dhibaataysan iyagoo ii muujinaya inay daacad ka tahay inay caawiyaan gabdhahaa walaalahood ah ee loogaga dhaartay in loo furo baabka isla guursiga.
Raggaasi waxay isugu jiraan kuwo xaasas leh iyo kuwo aan xaasasba lahayn waxaana ka go’n sida ay ii muujiyeen inaanay u aabayeeli doonin wixii ka dhasha oo ah carro ka timaada dhanka xaasaskooda, halka qaarna ayba farxaan kolkay I arkaan kolka aan kula kaftamo:
Oo maanta si baad u faraxsan tahaye sidee bay wax u jiraan? Kolkaa bay iigu jawaabaan:
Xaaskii Baa I Fasaxday!
Taasoo macnaheedu uu yahay, waxay igu tiri: Waad ila guursan kartaa.
Halka qaar kalena ay igu wareersheen ii raadi mid juuqla’ ah isagoo kawada ii raadi mid qudbo sira ah.
Haddii Alle idmo mawduucaasi qudbo siradana waxaad kaga bogan doontaa cutubka sadexaad ee kitaabka oo aan u bixiyay:
Qudba Siradu Waa Qaan Kugu Maqan
Waxaase ka horeeya cutubka labaad oo ah:
Kolkii ay arintu sidaa iigu caddaatay ayaan goostay bal inaan walalaha aanan rajo tirin oo aan ka caawiyo arintaa intii karaankayga ah.
Waxyaabihii aan ku caawin karayayna waxa uun bay ahaayeen goobo aan garanayay oo u badan masaajido ay iska diiwaan geliyaan dadka guur doonka ah. Kolkii aan waraysanay goobihii bal inay jiraan dumar Soomaali ah oo isugu jira gabdho, garoobyo iyo caraamiil laga geeriyooday oo u baahan in agoonta lala koriyo? Waxaa naloogu jawaabay hal gabar oo u dhalatay Soomaali inaysan faylkooda uusan ku jirin balse ay hayaan dumar kale oo u dhashay ummadaha kale ee muslimiinta iyo kuwo soo islaamay.
Waxaanse ka cudur daaranayaa inay mar labaad rag kale oo fara badan ay igu soo xoommaan markay maqlaan inay wax uun jiraan.
Waxaa cajiib ah in raggu badankood raadinayeen hablo Soomaaliyeed. Balse waxaa aad wax loola yaaba ah in garroobyadii iyo caraamishii laga geeriyooday ee la caawin lahaa ay kaalintoodii gabeen.
Waxaan shaki lahayn haddaad sidaa kusii socotaan in ay aad u adkaan doonto sidii suuq laydiinkugu heli lahaa, maxaa yeelay rag badan baa hadda diyaar idinla ah inay idiin caawiyaan isla markaana ay dhagahoodu ku bateen dumar Soomaaliyeed oo aad u badan baa dhibaataysan kadibna goostay inay qaadaan isbaaradan xaaraanta ah ee ku dhisan garaad la’aan iyo naxariis darro gaamurtay oo ay u dhigteen dumar walaal lammood ah oo waalan.
Waxaa iga tala ah inta ay arintu qoyan tahay inaad fadhiga ka kacdaan oo aad midowdaan maxaa yeelay kuwo xaasaska qababa way idiin midoobeen oo aad bay isaga kiin ilaaliyaan.
Intii aan ku hawlanaa baaritaanka mawduucan waxyaabihii iigu yaabka badnaa ee aan la kulmay waxaa kamid ahaa fadhi ay yeesheen dumar la qabo kuna saabsanaa inuu xaafadda ku dhuumaalaysanayo nin qarsanaya xaas labaad ee waa in lasoo qabtaa.
Dadka aad walaal ka dhiganaysaan ee ukhtii ukhtii aan waxba ka jirin idinku maaweeliya kol kolna aad caawisaan oo idinku xammaasha kolkii ay odayga idiin kala baqaana idiin erya waxba haka sugina
Sidaa darteed waa inaad midowdaan oo aad is raadsataan isla markaana aad is diiwaan gelisaan sida ugu dhaqsiinyaha badan, madaxna waa inaad yeelataan oo idiin kala haga isla markaana gudbiya codkiina, qofkaasina waa inuu yahay qof dumar ah oo xil kas ah xogtiina hoosana aad is dhaafsan kartaan.
Waxaa kale oo idiin kugu bishaaraynayaa in dumarkii xaasaska lahaa ay hadda aad u jilceen oo hadda sheekadii ahayd car ila guurso waa la isaga daba yimid ee idinka codkiina hala maqlo.
Sidaa darteed waa inaad yeelataan idaaro gaar ah oo qaabilsan qaabilaadda ragga ay soo eryaan xaasaska dhibka badan ee ku andacooda wuu ila guursaday IWM iyagoo marmarsiinyo ka dhiganaya masayr aan jirin maxaa yeelay shareecadu marna masayr ma diidin oo waligeed waa la masayri jiray tan iyo intii bani’aadam jiray balse diidmadu waa jaxdi waana arin laga madax adaygayo aayaadka Alle waana gaalnimo hadduu qofku xallaashado diidmadaasi Allaynu ka magan galnaye.
isla markaana waa inaad meelaysaan ninkaa lasoo eryay iskuna daydaan inaad u dhammaystirtaan inta u hartay ee xaasas ah si aan loo maqal dumar danbe oo ku andacooda wuu ila guursaday.
Waxaan kaloo idiin kugula talinayaa inaad la tashataan culimada caamiliinta ah ee diinta Alle sideeda ugu dhaqma si ay idinkaga digaan kuwa dhagarta badan ee dumarka khiyaameeya. Iskana ilaaliya kuwa cullimo lammoodo oo dhuuna qaatayaal ah.
Towfiiqda Allaha Ina Waafajiyo